Tselatra · Septambra, 2010 · Global Voices teny Malagasy
Tselatra · Septambra, 2010
Tantara tamin'ny Tselatra tamin'ny Septambra, 2010
Mpanoratra Firuzeh Shokooh Valle Nandika Andriamifidisoa Zo
25 Septambra 2010
Juan Carlos Rivera [es] sy i Hibueras [es] no mitatitra trangam-pamoretana hafa nataon'ny polisy nandritra ny fihetsiketsehana nataon'ny Mandam-panoherana tao an-tanànan'i San Pedro Sula. Nolazain'i Juan Carlos Rivera moa fa nahatrata roa alina ny isan'ny nandray anjara tamin'ny filaharambe notontosaina tamin'ny 15 Septambra. Namoaka ny sarin'ny fihetsiketsehana sy ny nataon'ny polisy tamin'izany moa ny lehilahy.
Mpanoratra Silvia Viñas Nandika Andriamifidisoa Zo
Mpanoratra Claire Ulrich Nandika Tomavana
20 Septambra 2010
Ny mpiblaogy Abena dia manolotra rohy mitondra any amin'ny lisitr'ireo “mainty fihodirana 100 izay to-teny indrindra eo anivon'ny serasera “Twitter”“. Somary kivy anefa izy raha nahita fa toa anarana faheno amin'ny tontolon'ny fampisehoana avokoa ny ankamaroan'ireo voatonona ao.
Are black men with the most impact on the planet likely to be rappers and sportsmen?
“Dia ireo mpihira rap sy mpanao fanatanjahantena izany no mainty fihodirana to-teny indrindra manerana izao tontolo izao?”
hoy izy manontany.
Mpanoratra Eremipagamo Amabebe Nandika Tomavana
Mizara lahatsary avy amin'olo-tsotra nahitana toa-javatra nitranga nandritra ny fankalazana ny faharoanjato taonan'ny fahaleovantena i Montserrat Nicolas; Asehon'ny lahatsary ary ny fomba nandravan'ny polisy ny famelarana ny Saina Mapuche sy ny fisamborana ireo nandray anjara tamin'izany fihetsika saiky hamelatra ny saina Mapuche izany. Naotin'ny mpandika : Ny Mapuche moa no vazimban'i Shili miaraka amin'ny Rapa Nui izay mponina any amin'ny Nosin'i Paska.
Gregory Simpkins miresadresaka mikasika izay krizy adinodino aty Afrika:
“If you ask most Africa watchers what is the most urgent crisis on the continent, you’ll likely get answers ranging from Sudan to Somalia or even Congo. It is not likely that Madagascar will rise to the top of the list…”
“Raha manontany ny ankamaroan'ireo mpanara-baovaon'i Afrika ianareo hoe iza amin'ireo krizy eo amin'ny kôntinanta no ilàna vahaolana maika, dia angamba sahala amin'i Sodàna na Sômalìa na i Kôngô aza no valinteny ho azonareo. Kely ny fanantenana hoe ho voatònona ao anatin'izany lisitra izany i Madagasikara… “
Mpanoratra Ndesanjo Macha Nandika Tomavana